Moomummaan Cehumsaa Oromiyaa Maaliif Barbaachisa? – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooMoomummaan Cehumsaa Oromiyaa Maaliif Barbaachisa?
Damee Boruu: 10/10/2020
TPLF namoota Afaan Oromoo dubbatan wara waraana irratti boojite dhabamsiisu dhiifte dhaaba OPDO jedhamu kan ijaarte Uummata Oromoo cabsitee biyyaa Oromoo saamuuf akkeekkatee akka ture wal nama hin gaafachiisu. TPLF waan lubbuu isaanii bararteef jecha warri boojuu waraanaa ture kun illee amma lubbuun jiran TPLFf jilbeefatanii daakanii, bukkeesanii, tolshanii sooruu irraa of duuba hin jenne. TPLF caalaa kan Uummta Oromoo basaasaa, hidhaa, ajjeesaa fi bakka buutee dhabamsiisa ture booji’amtoota maqaa OPDOn ijaaraman kana turan. OPDOn waggaa 27 fardi utuu hin taane gaarii TPLF turte. Fardi yaroo tokko tokko utaalee abbaa fardaa of irraa darba. OPDOn garuu gaarii TPLF taatee qabeenya Oromiyaa wagga 27 darban dadhabe utuu hin jenne akka guuraaf baate waan Uummatni Oromoo cufti ragaa bahu. Harcaatuu TPLF irraa hafte amma dandeessuu ofiifis saamachaa turte. Bara durii kaase namni waraana irratti booji’ame garba tahee isaa booji’eef ergamuun dhugaa jiru. Kanaafuu garbummaa isaanii hubatanii TPLFf amantii guutun ergamaa turan haa jennu.
Haa tahu malee Uummatni Oromoo lubbuu ilmaan isaa kumaatamaan itti wareegee waggaa lama dura humna Wayyaanee OPDO irraa buqqisee aangoo biyya bulchuu dabarsee laateef. OPDOn qaamaan utuu hin taane sammuun booji’amtee waan jirtuuf gooftaa malee jiraachuu waan hin dandeenyeef aangoo fudhatee nafxaootatti galii galuun baayyee nama qaaneesa. Warri nafxanyoota aangoo abbaa hin qabne argatanii shira dhuma hin qabne xaxuudhaan Uummata Oromoo irratti hammeenya Mootummaa Minilkii as dhaga’amee fi argamee hin beekne raawwachaa jiru. Bara aangoon harka OPDO jiru Oromoonni kumaata hedduun qe’ee isaanii irraa buqqa’anii bakka galan dhabaniiru. Lafaa fi qabeenyi Oromoo wagga lama keessatti kan 27 ol saamameera. Oromiyaan seeraa humna waraanan weeraramtee ‘komandi posti’ jalatti kuftee jirti.
Ilmaan Oromoo hidhaman, ajjeefaman, qaamni irraa hir’atee jiruu fi jireenyi isaanii barbadaa’e lakkobsa hin qaban. Qabeenya Uummata Oromoo waraanaan barbdeessuu fi saamuun hojii OPDO keessa isa duraa tahee jira. Har’a Oromiyaan Kibbaa amma Kaabaa, Bahaa amma Dhihaa humna waraanan weerarmtee jirti. Aadaa fi hoodni Oromoo safuu dhabee jira. Ilmaan Oromoo seeraa fi heera tokko malee akka saretti yaroo dhiitamaan argaa jirra. Haalli amma jiru kana keessatti humni nafxanootaa OPDO qabatee sanyii Uummata Oromoo lafa irraa dugugee balleessuuf halkanii fi guyyaa hojjechaa jira.
Utuu Oromiyaan haala muddamaa kana keessa jirtu yaroon Mootummaa Federala Itoophiyaa fi naannoo Onkoloolessa 10, 2020 jalqabee seeruma Federaalli Itoophiyaa qabuun raawwatee jira. Kana booda Mootummaa Naannoo Oromiyaas tahe Mootummaan Federalaa waan hojjetan hunduu seeraa ala waan taheef seeran fudhatama tokko hin qabu. Akka kana duraa illee nuti Mootummaa dha jedhanii uummata keenya irratti roorisuuf ayyaana hin qaban.
Yaroo kana keessatti ABO Mootummaa Cehumsaa Oromiyaa bu’ureesuuf waamcha gochuun Uummata Oromoof gaaffi belbelaa yaroo tahee jira. Uummatni Oromoo badii itti dhufaa jiru dandamachuu kan danda’u yoo yaroo gabaabaa kana keessatti Mootummaa Cehumsaa ijaarate qofa taha. Mootummaa Cehumsaa dhaabbatu keessatti bifa kamiin iyyuu humnoonni walabummaa Oromiyaaf dhaabbatanii falmataa jiran keessaa qoodha fudhachuun barbaachisaa taha.
Mootummaan Cehumsaa dhaabbatu duran dursee sanyii dugugaa Uummata Oromoo irratti deemaa jiru dhaabu qaba. Qabeenya Oromiyaa saamamuu irra akka oolu godha. Ilmaan Oromoo mana hidhaa keesatti dararamaa jiran hiika. Waraanni Oromiyaa irratti boba’e buqqa’ee gara kaampii isaa akka deebi’u. Uummatni Oromoo fi lamiin biyya Oromoo keessa jiraatan nagaa waaraa argatanii tasgabiin jiruu fi jireenya isaa akka gageefatan godha. Keessatti Oromiyaa keessatti jeequmsi jalqabame dhumatee uummatni keenyaa yaadoo tokko malee nagaan bahee akka nagaan galu mirkaneessa.
Tasgabiin argamee yaroo biyyi seeraa fi heera buluu irra gahe filmaata ilaa fi ilaamee qabuu godhee Mootummaan Uummata Oromoo bakka bu’u akka dhaabbatuuf haala mijjessa. Filmaata booda gaafa Caffeen Oromoo mootummaa uumataa muddatu yaroon mootummaa cehumsaa raawwachuu qaba. Mootummaan Cehumsaa haala mijjeessuu malee bakka Mootummaa Uummata Oromoo bu’e wilii hegeree Uummata Oromoo ilaalu malleteessuu irraa of qusachuu qaba. Uummata naannoo Oromiyaa yookan Impaayeera Itoophiyaa keessa jiran wajjin walii galtee gochuuf aangoo uummata kan qabu Mootummaa Oromiyaa filmaata booda dhaabbatu tahuun qajeelaa natti fakkaata.
Waamcha ABOn Mootumaa Cehumsaa Biyoolesa Oromiyaa godhe kana dhugoomsuuf ijaarsoonni hawwaasaa, oogesotaa, amantii, siyaasaa fi tokkoon Oromoo illee gummaacha danda’u gochuun sanyii Uummata Oromoo dugugamee baduu deemu jalaa ni baraara natti fakkaata. Humoonni qabsoo Bilisummaa Uummata Oromoof lubbuu isaanii aarsaa gochaa jiran adda duraan akka akeeka kana gargaaran mamii hin qabu. Yaroof sababa siyaasaaf jecha an illee maqaa isaanii kaasuu hin barbaadu. Waamichi kun iyyuu adda duraan kan isaan irraa maddu tahuu qabu natti mul’ata. Uummatni keenya guyyaa tokkoof illee tahe saamamuun, hidhamuun fi ajjeefamuun irraa dhaabbatee nagaan yaadoo tokko malee bahee yoo galuu waan guddaa dha.
Gadaan Gaddaa Bilisummaa Ti!
Qabsoo Oromoo: Mootummaan Maaliif Seera Addaa Baasa? Tigray: Ethiopian National Defense Forces have joined Eritrean…